Annaga nagu saabsan - Kdom
SIDEED, COLORFUL, FARXAD & CUTE.
Astaamahani waa waxa qeexaya nooca dukaankeena internetka, The Kdom.
Waxaan bixinaa Kpop Fashion oo ay xardheen sanamyada laftooda.
Waxaan rabnaa inaan kuu soo dhoweyno adiga kuugu dhow! Ugu Kdom aan u soo qaadano waxaad tahay dukaan qurux badan K-POP Dharka Dharka & Qalabka, laga soo qaatay funaanado ilaa koofiyadaha ilaa koofiyadaha .... waxaan halkaan kuugu haynaa adiga!
Kdom waa dukaan ay macaamiisha ku adeegan karaan moodada ugu dambeysa ee sanamyada ay jecel yihiin. Waxaan nahay dad aad u firfircoon oo firfircoon boggeena internetka ee Facebook & Instagram halkaas oo aan isku dayno sida ugu fiican ee aan ku soo bandhigno dhammaan waxyaabaha ugu dambeeyay iyo kuwa cusub ee kulul!
Waxaan ku dadaaleynaa inaan kuu soo qaadanno dharka ugu fiican & walxaha qiimaha la awoodi karo ee kaa dhigi doona inaad dib ugu soo noqoto wax badan. Waxaan ku kalsoonahay 100% Adeeg Dammaanad Leh!
Waxaan dareemaynaa inaan u baahan nahay inaan dhisno xiriir adag oo aaminaad leh macaamiisheena waana sababtaas darteed waxaan u helnaa koox taageero adag oo shaqeynaya si aan u buuxinno dhammaan baahiyahaaga iyo weydiimahaaga.
Waxaan ku faanaynaa nafteena inaan siineyno Bixinta Degdegga agabkeenna. Waxaan isku dayeynaa intii karaankeena ah in dhammaan amarrada la farsameeyo oo la raro sida ugu dhaqsaha badan.
Runtii waxaan aad ugu dadaalnaa sidii aan u hubin lahayn inaysan jirin wax dhibaato ah ookastoo ay jiraan amarrada macaamiisha.
Kdom waxay meherad ku jirtay shabakadda ilaa Juun 2016 waligeenna maan soo foodsaarin wax cabasho ama baahi ah soo noqoshada.
Dareen dhow inaad la wadaagto sanamyadaada K-POP, Kdom - K-PP Shopping Mall-kaaga.
Warbaahinta Kdom Bulshooyinka
Kooxdayada taageerada ayaa ah mid aad u tababaran oo dhiirigelisay inay ka jawaabaan dhammaan weydiimaha macaamiisha sida ugu dhakhsaha badan ee suurogalka ah
Ku cusbooneysii Kdom xisaabaadkayaga warbaahinta bulshada ee kor ku xusan.